Itholwe isikhulile ingane eyebiwa izelwe - Ilanga News
Home Izindaba Itholwe isikhulile ingane eyebiwa izelwe
Itholwe isikhulile ingane eyebiwa izelwe
Umndeni ubonga amaphoyisa aseJozini ngokusukumela phezulu uma ebikelwa ngomkhondo wayo
uNkz Fikelephi Mpontshana (25) uthi uvukwe wumunyu wahlengezela izinye-mbezi mhla ebona indodana yakhe, athi yebiwa inezinsuku ezine izelwe njengoba eyithole isineminyaka ewu-9 ubudala. Uthi ubengasathembi ukuthi uyoke aphinde ayibone.
UVUKWE wumunyu owesifazane waKwaPhaweni, eJozini ehlangana nendodana yakhe okokuqala emuva kweminyaka ewu-9 yantshontshwa ngowesifazane edolobheni lakule ndawo inezinsuku ezine izelwe.
Namanje kusenzima ukuba uNkz Fikelephi Mpontshana (25), akholwe wukuthi indodana yakhe isitholakele emuva kokuba yantshontshwa eneminyaka ewu-16 ubudala.
ILANGA libe nengxoxo ekhethekile noNkz Mpontshana emuva kokubuya kwemiphumela yolibofuzo ebiqinisekisa ukuthi ngempela uNhlakanipho Ngubane (9), owaqanjwa ngunina ukuthi ungu-Abongwe Gumede (isibongo sikayise), uyindodana yakhe ngempela.
“KwakunguNtulikazi (July) 2011, nginezinsuku ezintathu ngibelethile. Kwafika owesifazane engingamazi ekhaya, wasitshela ukuthi uqhamuka emnyangweni wezempilo uzosisiza ukuba sithole isitifiketi sokuzalwa kwengane ngokushesha.
“Wasithembisa ukuthi uzosilanda ngakusasa nomunye umzala wami naye owayenengane encane, kodwa eyakhe yayisinezinyanga izelwe. Wabuya ngempela ngakusasa, wasithatha.
“Kwathi sesisedolobheni eJozini, wasihlukanisa wayalela umzala ukuba aye kwenye indawo lapho ezosizakala khona, wathi mina mangihambe naye ngoba ingane yami isencane. Wangijikela sesihlukene nomzala wami waqala wakhuluma nami engithethisa, engitshela ukuthi ufuna ingane.
“Kwathi ngisamangaliswe yilokho, wanginika u-R11 wangithuma esitolo ukuba ngiyomthengela ikhekhe. Ngaphuma esitolo engasabonwa nengane yami. Kwathi uma ngiphuma ngahlangana nogogo wengane, ngambikela ukuthisengehlelwe yinto efana nalena, sahamba sayovula icala emaphoyiseni,” kusho yena.
Uthi amaphoyisa abheka aze ancama ingatholakali indodana yakhe nalona wesifazane. Uthi bathola umkhondo wokuthi umsolwa unezihlobo ayefikele kuzona ngakubo.
Ngesikhathi efika ezihlotsheni zakhe, wabuza ukuthi akekho yini umuntu wesifazane ezimaziyo osanda kubeletha ingane, ufuna ukumsiza, bamyalela kubo.
Uthi ngesikhathi umsolwa entshontsha indodana yakhe, wathatha nekhadi layo lomgomo nayo yonke imininingwane edingekayo uma ingane isanda kuzalwa.
“NgoLwezi (November) wonyaka ophelile, imithandazo yami iphendulekile ngesikhathi kufika udadewabo kamsolwa ezihlotsheni zakhe eyocela ukuthi zimshayele umazisi.
“Zambuza ngodadewabo, wabatshela ukuthi waboshwa eGoli ngo-2015 ngoba ezame ukubulala ingane yakhe yomfana nomyeni wakhe. Uthi wabatshela ukuthi unengane yomfana ayibeletha ngo-2011 ngoNtulikazi.
“Lwaqala lapho uphenyo lwamaphoyisa olwagcina luwaholele kuyena umsolwa ejele lapho edonsa khona isigwebo (sokuzama ukubulala ingane). wazivumela kuwona ukuthi ingane akuyona eyakhe, wayintshontsha eJozini ngoba enenkinga yokuthi wayengabatholi abantwana.
“Wathi umyeni wakhe wayazi ukuthi ukhulelwe kanti wayemkhohlisile. Kwenziwa ulibofuzo phakathi kwami nengane ekuqaleni kukaNhlolanja (February), imiphumela yakuqinisekisa ukuthi yindodana yami ngempela.
“Ngihluleke nawukuzibamba ngesikhathi ngiyibona okokuqala, ngahlengezela izinyembezi ngoba ngangingasazitsheli ukuthi ngiyoke ngiphinde ngiyibone indodana yami.
“Ngazibonela iqhamuka ukuthi yindodana yami ngenxa yokuthi ifana noyise. Isiyalazi lonke iqiniso lokuthi yimina unina wangempela, nokuthi kwenzekani.
“Okwamanje isahleli noyise lo ongayizali ongumyeni womsolwa ngaphansi kwesandla sosonhlalakahle, silinde ukuthi iqale iqede ukubhala esikoleni, nenkantolo isinike igunya lokuba ibuyele kimina ngokugcwele.
“Singijabulisile isimo engiyifice ikusona, ibibukeka iphatheke kahle,” kusho uNkz Mpontshana.
Uthi umndeni wakhe uhlele ukuthi wenze indumezulu yomcimbi wokwamukela indodana yakhe ngosuku ezofika ngalo.
UNkz Ncamisile Mpontshana onguninakhulu wengane, utshele ILANGA ukuthi namanje kusenzima ukukholwa ukuthi umzukulu wakhe ugcine etholakele emuva kweminyaka emingaka wanyamalala.
Uthi umndeni wonke usulinde usuku olukhulu ingane ezofika ngalo. Ubonge amaphoyisa aseJozini asebenze ngokuzikhandla, elandela lolu daba kusukela ngosuku abikelwa ngalo. Uthi bese kuyingane yesibili lena okwenziwe ulibofuzo nayo.
Imizamo yeLANGA yokuthola uyise wengane ehleli naye eGoli kayiphumelelanga, ucingo lwakhe belungangeni.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule icala lokuntshontshwa kwengane.
Uthe uphenyo lwamaphoyisa olunzulu obeluholwa nguCapt Saziso Ndwandwe ebambisene noSgt Qaphela Mdluli bophiko olulwa nokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane esiteshini saseJozini, lugcine luwaholela ekutheni kuboshwe owesifazane (onguKhanyisile Mkhwanazi- Ngubane) oneminyaka ewu-34.
Uthi umsolwa uvelile eNkantolo yeMantshi yasoBombo, eJozini ngoMsombuluko icala lakhe lahlehlela uZibandlela (December).
Previous articleKWEXWAYISWA UMPHAKATHI NGEZIMVULA EZINAMANDLA
Next articleIdili lamagoli koweDowns noSuthu